Chando Chebasa Chishandiso Simbi, Rinopisa Basa Turu Simbi - Histar
KUSVIRA KUSHANDA chishandiso simbi inowira mumapoka mashanu: kuomesa mvura, kuomesa oiri, kuomesa senge mweya mweya, yakakwira kabhoni-yakakwira chromium uye kuvhunduka kuramba. Sezvo zita ravo richireva, aya masevhisi anoshandiswa mune yakaderera kusvika pakati svikiro tembiricha mafomu. Yakanyanya kupfeka inodzivirira nekuda kweiyo yakakwira vhoriyamu yemacarbides mu
YEMAHARA SPEED simbi yakatumidzwa mazita kuratidza kugona kwayo kurwisa kupfava pane yakakwira tembiricha nekudaro ichichengetedza yakapinza yekucheka pamucheto kana kucheka kuchikurema uye kumhanya kwakakwira. Ndiwo akanyanya kugadzirwa pane ese echishandiso mhando dzesimbi.
MOLD STEELS anowanzo ave neakadzika kabhoni zvemukati - 0.36 kusvika 0.40% uye chromium uye nickel ndizvo zvinhu zvikuru zvinotsikisa zvinhu. Hunhu uhwu hunobvumira kuti zvinhu izvi zvikwenenzverwe kusvika pakakwirira zvakanyanya.
APPLICATIONS: Yakakwenenzverwa Flat bhaa inoshandiswa Punch chakuvhuvhu, mapanga, sikuruu muforoma, Chinaward muforoma Chakanakira: Izvi zvakateedzana zvigadzirwa zvinoderedza mutengo wekugadzira uye nekuvandudza mashandiro eanogadzira
TINOGONA KUPA ZVINOGONESA AS
ROUND BAR, FLAT BAR, BLOCK, STEEL MAPETE, MILLED FLAT BAR SEMI-YAKAPEDZWA MABHUKU UYE YAKAPEDZISWA MATOMBI.
Shanghai Histar Metal Co., Ltd yakavambwa muna 2003, Yakave ichitarisa pakutengesa kwechishandiso uye chakuvhuvhu simbi. Izvo zvave zvichikurumidza kukura zvichibva nemhando dzakasiyana dzechishandiso uye chimbi simbi, mhando yakanaka, mutengo unonzwisisika uye basa riri nani. Parizvino, iyo "HISTAR" chishandiso chishandiso uye zvigadzirwa zveforoma zvakatengeswa munyika dzinopfuura makumi mana nematunhu emhiri kwemakungwa, uye zvinopa masevhisi emhando yepamusoro kumakambani anopfuura zana emhiri kwemakungwa.
Tct Denderedzwa Yakaona Nereza Yesimbi, Tct Denderedzwa Yakaona Makasi, Tct Denderedzwa Yakaona Nereza, Hss M35 Denderedzwa Yakaona Makasi, Hss M2 Denderedzwa Yakaona Makasi, Kupisa Kwekushandisa Chishandiso Simbi Yakakungurudzwa Flat Bar,